မှတ်မှတ်ရရ တိုးရစ်ဂိုက် ဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မှတ်မှတ်ရရ တိုးရစ်ဂိုက် ဘ၀
မှတ်မှတ်ရရ တိုးရစ်ဂိုက် ဘ၀
Posted by moonpoem on Jan 22, 2013 in Creative Writing, Short Story | 23 comments
တစ်မုန်းစား တစ်မိုးနား ဖိနပ်စောင့် ဂိုက်ပညာ
ကျွန်မတိ်ုးရစ်ဂိုက် စလုပ်တာ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာဖြစ်သည်။ နာဂစ်ဖြစ်ပြီးခါစ ဘယ်ဧည့်သည် ဘာလူမျိုးမှ သိပ်မလာကြ။ တစ်လနေလို့ 
၃ခေါက် ခရီးသွားရလျှင်ပင် ကံထူးသူဖြစ်ပေဧ။် ။ စကားပြောရခြင်း၊ခရီးထွက်ရခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး တိုးရစ်ဂိုက်ဘ၀ကို ရွေးချယ်မိခဲ့သော ကျွန်မသည်
ထို အချိန်က စကားလည်း သိပ်မပြောရသလို ခရီးလည်း သိပ်မထွက်ခဲ့ရပါ။ ယခုလို တိုးတွေပေါပေါများများ
မရှိသဖြင့် ခရီးသွားကုမ်မဏီများကလည်း တိုက်ပိုင် ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကိုသာ အသုံးများပြီး ဖရီးလန့် စ် လိုက်သော ကျွန်မတို့ လို ဂိုက်တွေကို သိပ်လည်း မသုံးကြသေးပါ။ ကုမ်မဏီတွေက စမ်းပြီး ဂိုက်မထည့်ကျတော့ အတွေ့ အကြုံက မရ၊ အတွေ့ အကြုံက မရှိတော့ တခြား ကုမ်မဏီတွေကလည်း
မသုံးချင်နှင့် သံသရာလည်ကာ အိပဲ့အိပဲ့နှင့် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါဧ။် ။
တစ်လလုံးမှာ ငွေ၇သောင်းလောက်ဝင်လျှင်ပင် ကံထူးရှင်တစ်ယောက်ပမာ ပျော်နေတတ်သည်က ကျွန်မပါ။ ထိုအချိန်တွင် တိုးကုမ်မဏီတစ်ခုကို
ဖရီးလန့် စ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ကျွန်မ အလုပ်သွားလျှောက်သည် ။
ထိုကုမ်မဏီက ပိုင်ရှင်အစ်မက သဘောကောင်းစွာဖြင့် ယခုလို အချိန်မှာ ဖရီးလန့်စ်ဂိုက်ကိုတော့ သုံးရမှာ
အဆင်မပြေသေးကြောင်း သို့ သော် စိတ်ဝင်စားလျှင်တော့ တိုက်ပိုင်တိုးရစ်ဂိုက်အနေဖြင့် ထားချင်ကြောင်း
အတွေ့ အကြုံမရှိသေးသည့် အတွက် အတွေ့ အကြုံများလာအောင် ဂျူနီယာတစ်ယောက်အနေဖြင့်
အတွေ့ အကြုံများပြီ ဖြစ်သည့် စီနီယာ တိုးလိုက်သူများနှင့် ထည့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကမ်းလှမ်းလာသည်။
ပိုင်ရှင်အစ်မပြောတာ သဘာဝကျပါသည်။ကျွန်မသည် ဘာသာ စကားတစ်ခုပြောတတ်တာ ၊ ခရီးများကို
ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ထားတာ စသည်ကလွဲပြီး ဧည့်သည်ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးတာ၊ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ရှင်းလင်းသည့်တာ စသည့် အချက်အလက်တို့ နှင့် ပတ်သတ်ရ်ျတော့ ၀ါနုသေးသည့် အတွက်သူ့ အနေနဲ့စိတ်မချနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တိုးဂိုက်ဘ၀တွင် တစ်မုန်းစား တစ်မိုးနား ဆိုသည့် စကားပုံတစ်ခုရှိပါသည်။ သဘောကတော့ ဧည့်သည်အလာများသည့် ဆောင်းရာသီတွင် တိုးအ၀င်များပြီး ခရီးများများသွားရသဖြင့် ရေလျှံပါသည်။ သို့ သော်မိုးတွင်းကာလတွင် ဧည့်သည်ပါးသွားသည့် အတွက်နားရခြင်းကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ဧ။် ။
ဆောင်းရာသီတွင် ၀င်ငွေများသဖြင့် သုံးခြင်းတိုင်းတော့သုံးလို့ မရပါ။ မိုးတွင်းတွင် ဘယ်လိုဘ၀ရောက်မယ်မှန်းမသိသဖြင့် မိုးတွင်းအတွက်ပါ ကြိုတင်စုဆောင်းထားရပါသည်။သို့ သော်ထိုစဉ်က ကျွန်မဘ၀ကတော့ တစ်မုန်းလည်း မစားရသလို ၁မိုးလုံးလည်း ငတ်ခဲ့သည့်ဘ၀ပါ။
သည်တော့ တိုက်ပိုင်တိုးရစ်ဂိုက်အနေဖြင့် ထိုကုမ်မဏီကို ၀င်လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ တိုက်ပိုင်ဂိုက်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ
ကုမ်မဏီသည် ၁၅ရက်ကျော်တဲ့အထိတော့ တိုးပေးမည် မဟုတ်။
ရုံးမှာလည်း ၀င်ရောက်ကူညီရပေမည်။ သို့ သော် လစာလေးက ရ၊ အဆင်သင့်လို့ ခရီးသွားရလျှင်လည်း
အပိုဝင်ငွေရမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်သဖြင့် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီလိုနှင့် အလုပ်ဝင်ပြီး ၁လအကြာ ပထမဆုံး စီနီယာ တိုးရစ်ဂိုက်အစ်မတစ်ယောက်နှင့် ဂိုက်အသင်လိုက်ရသည်။ ခရီးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ တွင်း
ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါဧ။် ။ ထို စီနီယာ အစ်မသည် ကျွန်မပါနေသည့် အတွက် ဧည့်သည်ကို ပုံမှန်စကားများသာ ပြောပြီး ရန်ကုန်မြို့ နှင့် ပတ်သတ်သည်များ၊
တခြားသော ရာဇ၀င်များကို မရှင်းလင်းပါ။ ကျွန်မလည်း ဘယ်တော့များ ပြောမလဲ ရှင်းမလဲဟု စောင့်ဆိုင်းနေသော်လည်း မထူးခြားပါ။
အင်းစိန်ကျောက်တော်ကြီး၊ ဆင်ဖြူတော်၊ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအစ ရှိသည်တို့ တွင် သာမန် လမ်းလျှောက်ပြီး
စကားပြောခြင်းကိုသာ ပြုဧ။် ။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို ရောက်သော အခါ ဘာပဲပြောပြော ဗိုလ်တထောင်ဘုရားသည် ကန်တော့ပွဲ၊
မြနန်းနွယ်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘိုးဘိုးကြီး အစရှိသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ ရှိသောကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ ရှင်းပြတော့မည် ဟု မှတ်ယူလိုက်သည်။
သို့သော် စီနီယာ အစ်မကြီးသည် ကျွန်မကို ဧည့်သည်ဧ။် ဘွတ်ဖိနပ်မှာ တန်ဘိုးကြီးလှကြောင်း၊
ဖိနပ်ကောင်တာတွင် အပ်ခဲ့လျှင် ရသော်လည်း ပျောက်ရင် အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်းပြောပြီး
ကျွန်မကို ဧည့်သည်နှင့် သူဧ။် ဖိနပ်၂ရံကို စောင့်ဆိုင်းရန် တာဝန်ပေးခဲ့ဧ။် ။
ဒီတစ်ခါတော့ ဂိုက်အစ်မကြီး တကယ်ရှင်းပြပုံရသည်။ ဘုရားတွင် ၄၅မိနစ်ခန့် ကြာသည်။ သို့ သော်
ကျွန်မဘာမှ ပညာမရလိုက်ပါ။ ဖိနပ်စောင့် တာဝန်အနေဖြင့်သာ ဂိုက်ပညာကို သင်ယူခဲ့ပါဧ။်။
ကျွန်မကို ပညာပြလိုက်မှန်း ကျွန်မသိပါသည်။
ကျွန်မတို့ တွေ ဆရာစာရှင်းတာကို လက်ချာလိုက်သည့်အခါ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဆရာက လူအယောက်၁၀၀ကို တစ်ပြေးညီ သင်သော်လည်း လူအယောက်၁၀၀လုံးဧ။် မှတ်သားတာ၊ နားလည်သဘောပေါက်တာသည် မတူညီပါ။စာသင်ပြီးချိန်တွင် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း နားလည်သည် ဆိုသည်မှာ ရှားပါဧ။် ၊၊ သို့ သော် ထိုအရာမျိုးကို
စီနီယာတိုးဂိုက်အစ်မ မသိလို့ လား၊ သူ့ ထက် သာမှာ စိုးရိမ်သည်လား၊ သက်သက်မဲ့ပညာပြတာလား
ကျွန်မမသိပါ။ ပင်လယ်ရေသည် သောက်လို့ မကုန်ပါ။ ဖယောင်းတိုင်သည်လည်း တစ်တိုင်ဆီမီး တစ်တိုင်ညှိက
ကျွန်မကတော့ တိုးဂိုက်ပညာကို ထိုနေ့ က မရရှိလိုက်သော်လည်း တစ်ချိန်ချိန် ကျွန်မ၀ါရင့်ဂိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည့်အခါ
ကိုယ့်ဆီက ပညာသင်ယူသူ ရှိမည်ဆိုလျှင် တိုးရစ်ဂိုက်ဘ၀ကို စိတ်ပါလာစေရန်၊ပညာတွေ ကျွန်မထက်ပိုပြီး တက်မြောက်နိုင်ရန် ဧည့်သည်ကို ရှင်းလင်း
တိုးကန်ပနီတွေ ဧည့်သည်ကျဲပါးတဲ့ ရာသီတွေ (မိုးတွင်းတွေ)မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြသလဲ သိချင်သားဗျာ..
ဂလိုပဲ ၀န်ထမ်းတွေကို နားခိုင်းထားတာလားဟင်င်င်င်
မိုးတွင်းမှာ ဧည့်သည်နည်းပေမယ့် လုံးဝမလာတာတော့ မရှိပါဘူး။ ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး အစအဆုံး မ၀ယ်ဖြစ်ရင်တောင် လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ပေးတာမျိုး၊ ဟိုတယ်စီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဆောင်းရာသီ ခရီးသွားကာလမှာ နေ့ မအားညမနား အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွက် မိုးတွင်းမှာ နားရတာလည်း အပန်းပြေပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ ကတော့ ထား ..
ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေနဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း
မြန်မာပြည် ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေ … မြန်မာဟေ့လို့
ပြောလိုက်ရင် သွားသင့်တဲ့နေရာတွေ သမိုင်းကြောင်းတွေ
အချက်အလက်တွေ ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ရေးထားတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေ
အချက်အလက်အရပြောရရင်လည်း ..ဖူဂျီတောင် ၃၆၆၇မီတာမြင့်တာ ဂငယ်မှာ ကလေးကစလို့
လူတိုင်းသိပေမယ့် ရွှေတိဂုံဘုရား ဌာဏ်တော် ဘယ်လောက်ဆိုတာ ဂိုက်တိုင်းတောင် အလွတ်မရဘူးမလား…။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က မိတ်ဆွေ ဂငယ်တယောက် မြန်မာပြည်သွားချင်တော့
ကျနော့်ကိုလာမေးရင်း ရှာဖွေပေးရင်း ရန်ကုန်ရုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးရင်း နဲ့ သိခဲ့ရတာလေးပါ။
မြန်မာပြည် ခရီးသွား Guide Book အနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ ၁အုပ်သာ ရှာတွေ့ချိန်မှာ
ထိုင်း tour guide book က ရာဂဏန်း ထွက်ကျလာသဗျ…
ဆိုလိုချင်တာက အနှီ tour company တွေအနေနဲ့ ဧည့်ပါးတဲ့ကာလတွေမှာ
အဆိုပါ guide book တွေ ပြုစု ရေးသားထုတ်ဝေ ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါပဲ…
ဒါဟာ ဟိုတယ်ခရီးရဲ့ တာဝန် သက်သက်မဟုတ်သလို …နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့ တာဝန်လည်း
စာအုပ်ပုံစံ ရောင်းတမ်းမဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ့် ကန်ပနီ ကိုယ့် ဆားဗစ် အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သုံးအနေနဲ့သုံးရင်
သူများထက် သေသေချာချာ ကျကျနန ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်လို့ သူများထက်သာမယ့် သူများထက် ကောင်းမယ့်
မှန်မှန်ကန်ကန် အောင်မြင်မယ့် အရာဖြစ်လို့ တိုးကန်ပနီတွေ အားလပ်ချိန်တွေမှာ … ဘာသာရပ်
ကျွမ်းကျင်သူ (ဂိုက်တွေပေါ့လေ) ၊ သမိုင်းကျွမ်းကျင်သူ ၊ ဒေသခံ စတာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး
အဲ့ဒါတွေ လုပ်ကြည့်စေချင်ပါကြောင်း ….။
(အတွေးသက်သက်များ …- ဆေးလှုပ်သောက်ဦးမှ)
အဲဒါလေးက လည်း ပညာရပ်တစ်ခုဘဲမို့လား။။
ဒါပေမဲ့ လိုက်နာအပ်တဲ့ ပညာရပ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့…
ဘ၀ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖတ်ရတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဆက်လက်ရေးဖို့ ရှိရင် ရေးပါအုန်း။ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်နေပါတယ်။
အစ်မအောင်မြင်တဲ့ tourist guide တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့
ဖတ်ရတာလေးက ကိုယ်တွေ့လေးမို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဒီလိုပါဘဲ ပေးဝေမျှတတ်သူ နဲ့ ရယူလိုသူ နှစ်မျိုး ဘယ်အလုပ်ထဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပေးဝေမျှကြည့်ပါ အခြံအရံပေါများခြင်း ချစ်ခင်သူများခြင်း တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မသိကြလို့ပါ။ ဥပမာ- တကယ့်စေတနာနဲ့ သင်ကြားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေမှာ ဘာလို့ ချစ်ခင်တဲ့ တပည့်တွေများ လည်း သူကပေးဝေမျှတတ်သူမို့လေ။ သူတစ်ပါးကို ကိုယ်သိတာလေး ပြောလိုက်ရလို့ ကိုယ့်ထဲက အသိတွေ ပညာတွေက အဲဒီ ပြောပေးလိုက်တဲ့သူဆီ ပြောင်းရွှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူရော ကိုယ်ရော သိသွားကြတာပါ။ ပြန်လှန်မေးတတ်တဲ့သူမျိုးကိုပြောမိရင် ကိုယ်တောင်ပညာထပ်တိုးအုံး မှာလေ။
သြော် …. ပုရွက်ဆိတ်နဲ့ နှံကောင်ပုံပြင်ထဲက လိုပဲ မိုးတွင်းစာ စုထားရတာကိုး။
ငါးစာပေးပြီး ကွန်ချက်မပြတဲ့ အဲဒီလို စီနီယာတွေရှိနေလို့ နောက်လူတွေအတက်နှေးတာ။
မန်းလေးမှာ ကျောင်းတတ်နေတုန်းက တိုးဂိုက်ဘဝကို တကယ်ပဲ နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်
အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဂျပန်စာ သင်တန်းတွေတက်ပြီး ညနေဘက် မန်းတောင်ပေါ်သွား
ဂိုက်မပါတဲ့ တိုးရစ်တွေ့ရင် ဗလား ဗလား တစ်ခွန်းစ သွားပြော လုပ်ခဲ့သေးတယ်..
ဒီလိုပညာတွေလဲ ရှိတာသိခဲ့ရတာမို့ ကြံဖန် ကျေးဇူးတင်လိုက်နော်…
ပိုအမ်လေး.. အူးစည်ပြန်လာရင် တိုးရွစ်ဂိုက်စ်အနေနဲ့
ရွှေတိဂုံဘုရားကို.. ပြပေးလို့ရမလားဟင်.. ခုထိ
မုခ်တွေ သေချာ မသိသေးလို့ဘာ…။ ဥာဏ်ပူဇော်ခ..
၀ါသနာတွေထဲမှာ အစားစားရတာအပြင် ခရီးသွားရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်ကို မွေးနိုင်လိုက်တာမို့ အမြတ်ထွက်တယ် ပြောရမှာပေ့ါ။
ပညာပြလိုက်တဲ့ စီနီယာအမ အတွက်တော့ အရှုံးချည်းပဲပေ့ါ။ :hee:
အားပေးပါတယ် လကဗျာလေး ရေ။
နောက်လာမယ့် တိုးဂိုက်အတွေ့အကြုံများကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ညီမလေး moonpoem ရေ…. ဒီလိုပါဘဲ လူအမျိုးမျိုရှိတတ်ပါတယ်… ကိုယ့်ကို စေတနာထားပြီးတွဲခေါ်တယ့်လူ ရှိသလို… သူတို့ထက်သာသွားမှာ၊ သိသွားမှာကိုမနာလိုတယ့်သူတွေလည်းအများကြီးပါ…
(ကိုယ့်ဆီက ပညာသင်ယူသူ ရှိမည်ဆိုလျှင် တိုးရစ်ဂိုက်ဘ၀ကို စိတ်ပါလာစေရန်၊ပညာတွေ ကျွန်မထက်ပိုပြီး တက်မြောက်နိုင်ရန် ဧည့်သည်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်မည်)
ညီမရဲ့စေတနာထားတယ့် စိတ်ကူးလေးကိုလည်း သဘောကျကျေနပ်မိပါတယ်…ညီမလေး အောင်မြင်သော ဂိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်….
နောက်ထပ်ကိုယ်တွေ့လေးတွေကိုလည်း ရေးပေးပါအုန်းနော်.. စောင့်မျှော်အားပေးနေပါတယ်လို့….
“ဒီလိုနှင့်….စီနီယာ တိုးရစ်ဂိုက်အစ်မတစ်ယောက်နှင့်…ထို စီနီယာ အစ်မသည် ကျွန်မပါနေသည့် အတွက် ဧည့်သည်ကို ပုံမှန်စကားများသာပြောပြီး….ကျွန်မဘာမှ ပညာမရလိုက်ပါ။ ဖိနပ်စောင့် တာဝန်အနေဖြင့်သာ ဂိုက်ပညာကို သင်ယူခဲ့ပါဧ။်……………..ကျွန်မကို ပညာပြလိုက်မှန်း ကျွန်မသိပါသည်”
ကိုယ်ကလိုချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့လေ။ ကိုယ်ကလိုချင်တဲ့သူဖြစ်လို့ သူ့ဘက်ကကိုယ့်ကို လိုလိုချင်ချင် ပညာမျှပေးချင်စိတ်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ယူရမှာပါ။ သူမပေးရကောင်းလားဆိုပြီး သူ့ကိုအဲ့လိုမြင်လို့မရပါ…judgeလုပ်လို့မရပါ။ သူကညီမလေးအကူအညီလိုနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေ။
အတွေ့ အကြုံ လေးများ ဆက်ရေးပါဦး ……
ဒါမျိုးတွေ က သိရ ခဲပါတယ် …..
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းဆိုတာမျိုးက ဘယ်တော့မှ သင်ယူလို့ မကုန်နိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေ ပါ။ တိုးတက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတာကို အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်သင်နေ ရတာပါပဲ။ ဘယ်သူမှလဲ ငါအကုန်တတ်တယ်၊ ငါလောက်သိတာ မရှိဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတတ်သလိုထင်ပြီး မျှဝေရကောင်းမှန်း၊ လက်တွဲခေါ်ရကောင်းမှန်း မသိတာကတော့ အတော်ကို သေးသိမ်တယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတဲမှာ ယနေ့အထိ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒီလုပ်ငန်းက ဘာကိုမှ ကိုယ်တစ်ယောက်တဲ သိတာ၊ ငါသူများကို မပြောဘူးလို့ ထားလို့ရတာ မျိုးမှ မဟုတ်ပဲ။
ငါ့လောက်တတ်သူမရှိ။ ငါအချိန်ကုန်ခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီး လေ့လာထားတာတွေကို သူများကို မပြောဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ဓတ်မျိုးနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းနဲ့ မအပ်စပ်ပါဘူးဗျာ။
moonpoem စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေ အောင်မြင်မှာပါ။ ဒီလုပ်ငန်းက life long learning လို့ ပြောရမှာပါ။ ဆက်ကြိုးစားပါလို့လဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
လမ်းမလျှောက် နိုင်ခင် ၀မ်းလျှားထိုး လေး သွားပြီး . ….. တစ်နေ့နေ့ မှာ ပြေး နေနိုင်ပါစေဗျို့  …။
ယောက္ခမနိုင်တာခံရတဲ့ ချွေးမဟာ ယောက္ခမဘ၀ရောက်တဲ့အခါ သူ့ချွေးမကိုလည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားတတ်ပါသတဲ့။
အဲဒါ လူသာမာန်တွေရဲ့ သဘာဝပေါ့။
စိတ်ထားမြင့်မြင့်ထားတဲ့သူကတော့ ငါခံရသလို သူများမခံရပါစေနဲ့လို့ စိတ်ကိုထားကြပါတယ်။
လကဗျာလေးလည်း ကိုယ်စီနီယာဖြစ်ရင် ဂျူနီယာလေးတွေကို သင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။
အားပေးသွားပါတယ် လကဗျာ ရေ့။
အစ်မပဒုမ္မာ ပြောတာ ကို ထောက်ခံရင်း အစ်မပဒုမ္မာရဲ့ နောက်လိုက် မှတ်ချက်လုပ်ပါတယ်။
Moon Poem ကရော ၊
ကျမကို ပညာသင်ပေးပါ ဆိုပြီး ရိုရိုကျိုးကျိုး တောင်းဆိုခဲ့ရဲ့လား ။
မတောင်းဆိုခဲ့မိဘူး ဆိုရင် အဲဒီ Guide အမကြီး ဘာမှ မမှားပါဘူး ။
အဘ အနေနှင့် ၊ ကိုယ့်ဆီက ပညာကို ၊
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိုလိုချင်ချင် တောင်းယူလျှင်တော့ ၊
ပညာကို မျှဝေ မပေးနိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ မသိမသာ ပညာခိုးယူပြီး ၊
ဆရာလို့လည်း အသိအမှတ် မပြု ၊
အခွင့်သာရင် ကျေးဇူးပါ ကန်းသွားတတ်လို့ ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ ပညာ အလကား မပေးပါ ။
ပညာ ဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ် ၊
ရိုကျိုးမှု / ငွေကြေး တစ်ခုခုရမှသာ ပေးနိုင်ပါတယ် ။
ကျောင်းမှာ စာပြတဲ့ ဆရာတွေကလည်း ပိုက်ဆံရလို့ စာသင်နေတာပါ ။
နောက်ပြီး Tour Guide ပညာဟာ Professional ပညာပါ ။ ကွန်ချက်တွေပါ ။
ငွေကြေးအရကြည့်ရင် ကျောင်းမှာ ပြနေတဲ့ စာတွေထက်သာပါတယ် ။
ကွန်မန့် တွေ ဖတ်ရတာ ၀မ်းသာစရာပါ။ အားလုံးက ကျွန်မကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ၊ ၀ိုင်းဝန်း အားပေး သွန်သင်ဆုံးမကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ဂိုက်ဘ၀မှာ ကြုံရတာလေးတွေကို ဆက်ပြီး ရေးသားပါဦးမယ်။
ပညာပြန်ဖြန့် ဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့ လလေးရဲ့ သဘောထားကို လေးစားမိတယ်ကွဲ့ 
I love your post so much sis jia you!!!